Raysal Wasaaraha DFI Oo Ay Wahelinayaan Madaxwaynaha DDSI Iyo Madax Sare Oo Bariga Itoobiya Ayaa Maanta Dhagax Dhigay Xarunta Warshadaha Ee M. Diridhaba. - Cakaara News
Raysal Wasaaraha DFI Oo Ay Wahelinayaan Madaxwaynaha DDSI Iyo Madax Sare Oo Bariga Itoobiya Ayaa Maanta Dhagax Dhigay Xarunta Warshadaha Ee M. Diridhaba.
Diridhaba(CN) Isniin.May.18.2015 wafti sare oo uu horkacayo raysal wasaaraha DFI mudane Hailemariam Desalegn iyo madaxda bariga Itoobiya oo ay kamid ahaayeen madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar, madaxwaynaha Hararida mudane Muraad Cabdilhadi iyo Mayorka maamulka magaalada Diridhaba mudane Ased Ziyad ayaa maanta dhagax dhigay xarunta horumarinta warshadaha ee bariga Itoobiya duleedka magaalada Diridhaba. Waxaaba munaasibadan kasoo qayb galay masuuliyiin sare oo dalka iyo deeganada bariga ah, shacabka ree Diridhaba, odoyaal dhaqameedka iyo marti sharafkaloo badan.
Raysal wasaaraha DFI mudane Hailemariam Desalegn ayaa kasoo kicitimay dhanka xarunta dalka waxaana ugu horayntii si balaadhan oogu soo dhaweeyay gagida diyaaradaha ee magaalada Diridhaba madax sare oo deegaanada bariga Itoobiya ah.
Hadaba raysal wasaaraha dalka mudane Hailemariam Desalegn oo ay wahelinayaan madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar iyo madaxda kale ee deegaanada bariga Itoobiya oo ay kamid ahaayeen madaxwaynaha Hararida mudane Muraad Cabdilhadi iyo Moyorka magaalada Diridhaba mudane Ased Ziyad ayaa maanta dhagax dhigay xarunta warshadaha oo si wayn dhaqaalaha dalka wax uga badali doonta gaar ahaana ahmiyad balaadhan ugu fadhida deegaanada bariga Itoobiya ee Soomaalida, hararida, gobolka bari ee Oromada oo ay dhamaantood xudun u tahay magaalada Diriddhaba.
Raysal wasaaraha DFI mudane Hailemariam Desalegn ayaa halkaasi kasoo jeediyay khud bad dhinacyo badan taabanaysay oo si wayn uga hadlay ahmiyada xarunta horumarinta warshada ee Dridhaba oo guud ahaanba dhaqaalaha dalka iyo horumarka warshadaha kaalin laxaad leh kaqaadan doonta. R/wasaaruhu waxaa uu sheegay inay Diridhaba oo bariga Itoobiya badhtan u ah ay ahmiyad gaar ah u yeelan doonto dadka Diridhaba, gobolka Sitti, gobolka bariga Oromiya, Hararida iyo dhamaanba ree bariga Itoobiya.
Raysal wasaaraha ayaa mar uu kahadlayay istaraatiijiyada horumarinta warshadaha ee Diridhaba ayuu sheegay in sidoo kale uu mashruuca wayn ee gaadiidka tareenka casriga ee Ilaa Jabuuti uu shaqadiisa toos u bilaabi doono bisha Hidhaar ee sanadan fooda inagu soo haysa. Wuxuuna raysal wasaaruhu faray in ay dawladaha iyo maamulada Bariga Itoobiya ay haatan kusii xisaabtamaan cududa shaqaale e ay mashaariicdan horumarin ee baaxada leh u baahanayaan iyadoo ay taasina fursad balaadhan u tahay guud ahaan dalka gaar ahaana bariga Itoobiya.
Sidoo kale Raysal wasaaruhu waxaa uu carabka ku dhuftay oo uu amaansaday in shacabka bariga Itoobiya ama dhamaan Itoobiya ay kaalintooda kasoo baxaan kaga adaan sidii ay doorashada 5aad ee dalku u noqon lahayd mid nabad galiyo islamarkaana ugu guulaysan lahaa ururka talada haya ee EPRDF oo uu cadyahay wax qabadkiisa dhinac walba.
Madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar ayaa munaasibada kasoo jeediyay khudbad hanbalyo iyo dhiiri galin xanbaarsan oo uu kaga hadlay ahmiyada horumar ee aas aasida xaruntan warshadaha ee laga hirgalinayo bariga Itoobiya, isagoo sheegay in ay farxad wayn u tahay gobolkan bariga iyo isbadalka guud ee dalka. Wuxuuna sheegay madaxwaynuhu in ay istaraatiijiyada horumar ee EPRDF kutimid dadaaladan xawliga ah ee marba marka kadanbaysa kasii xoogaysanaya.
Sidoo kale waxaa iyaguna khudbado dhaxal gal ah halkaasi kasoo jeediyay madaxwaynaha deegaanka Hararida mudane Muraad Cabdilhadi iyo Mayorka maamulka magaalada Diridhaba mudane Ased Ziyad oo isagu si gaar ah uga hadlay taariikh ahaan in dalkeena ay Diridhaba istaraatiiji ahaan u mudan tahay horumarinta warshadaha maadaama haatana lasii xoojiyay oo ladhamaystiray gaadiidka casriga ah ee tareenada oo isku xidhaya dalkeena jaarka ah ee Jabuuti.
Waftigan uu raysal wasaaruhu horkacayo ayaa maanta sidoo kale ku booqanayay goobaha dhagax dhiga tareenkan casriga ah oo mardhaw si toos ah u bilaabi doona shaqadiisa. Kasakow mashaariicdan gaadiidka tareenka casriga ah iyo xarunta warshadaha, waxaa kale oo magaalada Diridhaba laga wadaa dhismaha garoon ciyaareed wayn oo aad casri u ah kaasoo ahmiyad wayn u leh dhanka dhalinyarada iyo Sportiga.
Hadii Eebe raali kanoqdo Dib ayaan idiinka soo gudbin doonaa wararkayaga danbe ee CakaaraNews warbixinta dhamaystiran ee kusaabsan Diridhaba iyo waftiga raysal wasaaraha, gaar ahaan ahmiyada xarunta warshada ee ladhagax dhigay.